Yini ama-Analytics? Ama-Analytics Technologies anquma Izinqumo Zokumaketha
Kwesinye isikhathi kufanele sibuyele kokuyisisekelo bese sicabanga ngempela ngalobu buchwepheshe nokuthi bazosisiza kanjani. Izibalo ezisezingeni eliphansi kunazo zonke ulwazi oluvela ekuhlaziyweni okuhlelekile kwedatha. Sixoxile amatemu wokuhlaziya iminyaka manje kepha kwesinye isikhathi kuhle ukubuyela kuzisekelo.
Incazelo Yezibalo Zokumaketha
Marketing analytics iqukethe izinqubo nobuchwepheshe obenza abathengisi bakwazi ukuhlola impumelelo yezinhlelo zabo zokumaketha ngokulinganisa ukusebenza (isb., ukubloga ngokuqhathanisa nemithombo yezokuxhumana kuqhathaniswa nokuxhumana kwesiteshi) besebenzisa amamethrikhi webhizinisi abalulekile, njenge-ROI, ukumakethwa okunikezwayo nokusebenza kahle kokukhangisa. Ngamanye amagama, ikutshela ukuthi izinhlelo zakho zokumaketha zisebenza kanjani ngempela. nge SAS
Yini i-Analytics - Ividiyo evela ku-IBM
Njengoba kuphathelene nokukhangisa online, Web Analytics amapulatifomu yizinhlelo ezithi qoqa, uhlanganise bese ubika emsebenzini wezivakashi eziya kumasayithi wethu aku-inthanethi noma ukuxhumana kwemithombo yezokuxhumana. Kukhona ama-subsets we analytics ukuthi abathengisi kufanele bazi futhi basebenzise ngezikhathi ezithile:
Izibalo Zokuziphatha - izindlela izivakashi ezizithathayo nokuthi zisebenzisana kanjani nekhasi ngalinye ziyimininingwane ebucayi yokuqonda ukuthi isiza sakho singalungiswa kanjani ngokuzibandakanya okwandayo nokuguqulwa. Abantu abaningi kakhulu baklama isiza esihle futhi bakhohlwe ukuthi empeleni kuyisango lokwenza ibhizinisi. Kukhona ithoni yesayensi yokusebenziseka nesipiliyoni engasetshenziswa ukukhulisa inani lesiza sakho kubhizinisi lakho.
I-Business Intelligence - noma i-BI analytics hlanganisa zonke izici zokusebenza kwenhlangano yakho, kusuka kwezokumaketha kuya kokusebenza kanye nokubalwa kwezimali, ukuze ubuholi obuphezulu buqaphele indlela yokuziphatha kwenkampani. I-BI iphakathi nendawo ekuqapheleni nasekuhleleni ukusebenza kwezinhlangano eziphakathi, ezinkulu nezamabhizinisi.
Izibalo zokuguqulwa - ukuguqulwa kusayithi kungumsebenzi wenani. Okusobala kakhulu ukuthenga kusayithi le-ecommerce. Kodwa-ke, uma isiza sakho sithuthukisa insizakalo, ukuguqulwa kungaba yinani lezivakashi ezibhalisela isivivinyo samahhala, idemo, ukulanda, i-webinar noma omunye umsebenzi okhonjisiwe ukuhlinzeka ngenani. Ukuguqulwa analytics imvamisa kufaka ukufaka ukuhlolwa kwezinto ukuze ukwazi ukwengeza isayithi ukuze uguqule izivakashi eziningi zibe amakhasimende.
Izibalo Zamakhasimende Ezobunhloli - Izinkampani eziningi aziqapheli ngenkuthalo ukuthi amakhasimende abo ayazithanda yini noma cha nokuthi iziphi izivimbamgwaqo ezibandakanya ngokuphelele. Amasistimu avumela impendulo yamakhasimende ngeziteshi zenhlalo, izinhlolovo namanye amaphuzu okuqoqwa kwedatha anganikeza ngocwaningo oluyigugu lokuthi inkampani yakho ibonwa kanjani nokuthi yini ongayenza ukuyithuthukisa.
Izibalo Zokuphila Kwamakhasimende - Ukuqonda izigaba zekhasimende lakho kubalulekile ekwandiseni ukugcinwa kwamakhasimende, ukukhuphula inani lamakhasimende, bese ukuthola imininingwane yesikhathi esizayo kuqhathaniswa nokuzibandakanya okuphumelele kakhulu onakho. Ambalwa amapulatifomu alinganisa izigaba kanye nabaxhasi bethu bokumaketha abazisebenzisayo ku Ngakwesokudla ku-Interactive, qiniseka ukuthola i-demo yesistimu yabo.
Ukuhlaziya imiyalezo - ukumaketha okuzenzakalelayo, imeyili, ukubika ibhokisi lokungenayo, I-SMS, ifoni, nezinye izinhlelo zokuthumela imiyalezo zinikela analytics ukukunikeza umsebenzi ngomkhankaso ngamunye, umsebenzi wobhalisile, futhi uvame ukuhlanganiswa nomunye analytics amasistimu okusiza ukuthuthukisa ukuthumela kwakho imiyalezo kanye nomkhankaso.
Ukuqagela Ukuhlaziya - ngokususelwe ekusebenzeni okwedlule kwesayithi lakho, lawa mapulatifomu empeleni abikezela ukuthi ukuziphatha kwabavakashi kuzoba yini. Ukuqagela analytics amapulatifomu avame ukunikela ngamamodeli lapho ungenza khona ukulungiswa futhi ubikezele umthelela walezo zinguquko ekusebenzeni kwesayithi lakho. Isibonelo, kuthiwani uma usika umholo wakho ngokuchofoza kabili bese ukhuphula isabelomali sakho se-infographic?
Ama-Analytics wesikhathi sangempela - nikeza ukuqonda ngomsebenzi wamanje nokuziphatha kwezivakashi kusayithi lakho ngesikhathi samanje. Isikhathi sangempela analytics kungathintwa ukuze kuguqulwe indlela yokuziphatha kwabavakashi, kwandise amathuba okuguqulwa, futhi kuhlinzeke ngokuqwashisa ngomzuzu kuya kumzuzu wokuphendula wesayithi lakho.
Sales Analytics - Ukuthengiswa kwamandla ngumkhakha wezobuchwepheshe okhulayo. Ama-dashboard wokuthengisa njengabaxhasi bethu ku Ukuthengiswa hlanganisa ngqo ne-Salesforce CRM yakho futhi unikeze ukuphathwa kokuthengisa ngayo yonke imininingwane abayidingayo ukubona nokubikezela ukusebenza kokuthengisa. Futhi kumthengisi, lezi zinhlelo zibasiza ukuthi bandise umkhiqizo, basebenzise izindawo zokuthinta, futhi bavale amadili amakhulu ngokushesha.
Sesha izibalo - Ama-backlinks yizinga legolide elisezingeni ku-Intanethi nezinga lokushayela kwezimoto nokuguqulwa. Njengomphumela, amathuluzi akusiza ukuqapha ifayela lakho le- amagama angukhiye we-injini yokusesha, izimbangi, nokuthi okuqukethwe kwakho kukleliswe kanjani ingakusiza ukuheha izivakashi ezintsha futhi wakhe amasu wokuqukethwe aqhuba ibhizinisi. Usesho olukhokhelwayo analytics ikunikeze ngokusebenza kwegama elingukhiye namamethrikhi wokuguqula ukuze ukwazi ukwehlisa izindleko zakho ngokuhola ngakunye futhi wandise ukuthengisa.
Izibalo Zomphakathi - njengoba i-Intanethi ithuthukile, abantu nezinkampani zakhe igunya lokuziqoqela abalandeli abalandelayo. Komphakathi analytics lingalinganisa lelo gunya, lilandelele isikhundla sakho senhlalo, likusize uqonde ukuthi kungani abantu bekulandela nokuthi yiziphi izihloko abaxhumana nawe kakhulu kuzo. Ukukusiza ukuthi ukhule ukulandela okuhambisana nomphakathi kanye negunya kuvame ukuholela ekwandeni ukwethembana phakathi kwezithameli zakho noma umphakathi - ongasetshenziselwa ukunanela ukukhushulwa kwakho noma nokushayela ukuguqulwa okuqondile.
Vele, zonke lezi zinhlelo zinganikeza imininingwane egcwele kakhulu futhi zivame ukuholela ukuhlaziywa ukukhubazeka. Kuhle ukubona analytics amapulatifomu avula ama-API awo futhi ahlanganiswe namanye amaqembu wesithathu ukuthuthukisa ngokuzenzakalela umuzwa wamakhasimende. Ukugxeka kwami ​​okukhulu kwe analytics amapulatifomu ukuthi aqoqa futhi abike imininingwane, kepha kuyaqabukela enze isincomo. Amapulatifomu wokuhlola ukuguqulwa enza kahle lokhu - ngifisa sengathi konke okunye bekungakwenza! Njengesibonelo, angiqondi ukuthi kungani analytics amapulatifomu awanikeli ukuqonda ngamasu wokuqukethwe futhi akunikeze izincomo ngalokho okufanele ubhale ngakho.
Tags: izibalo zokuziphathakwezamabhizinisiizibalo zokuguqulwaincazelo yama-analyticsincazelo yama-analytics wokumakethaizincazeloama-imeyili analyticsI-google analyticszisebenza kanjani izibaloukuthi isebenza kanjaniIBMezokuhlaziyaizibalo zemiyalezoukukhishwai-analytics yokubikezelaizibalo zesikhathi sangempelaizibalo zesayithiizibalo zomphakathianalytics media socialIsibongo Sakhoizibalo zewebhusayithiimvuyini ama-analytics
Khulisa Amathuba Okuqukethwe Kwakho Okusakazeka Ngalawa maqhinga ama-5